Posted by Tranquillus | Mar 10, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Maanta, emailku waa habka ugu wanaagsan ee loola xiriiri karo fududaanta, xawaaraha iyo waxtarka. Isbedel xirfadeed, waa habka ugu badan ee loo isticmaalo.
Si aad u qorto a boostada xirfadeedwaa inaan ixtiraamnaa shuruudaha qaarkood, talooyin iyo xeerar, kuwaas oo aan isku dayi doono inaan kuu sharxo dhamaan qodobka.
Tusaale qorshe qoraal ah oo loogu talagalay emayl xirfadeed
Mararka qaarkood boosteejada way adag tahay in la maareeyo macnaha xirfad. Qorshaha in la raaco si loo qoro emayl xirfad leh waa in lagu dhajiyo qofka qaata dhammaan qaybaha lagama maarmaanka ah oo kooban oo sax ah.
Si aad u qorto emayl xirfad leh, waad qaadan kartaa qorshaha soo socda:
Shey cad oo cad
Bilowga waa in la ogaado qaabka isgaarsiinta
Qaaciddada caqli-gal ah si loo soo gabagabeeyo
Dooro mawduuca emailka xirfadeed
Waxaa lagu qiyaasaa in xirfadlaha uu heli karo celcelis ahaan 100 emayl maalintii. Sidaa darteed waa inaad doorataa mawduuca emaylkaaga si aad ugu dhiirrigeliso inay furaan. Si tan loo sameeyo, waxaa jira sharciyo la raaco:
1-Qor shey gaaban
Si loo kordhiyo heerka furitaanka e-maylkaaga, khubaradu waxay kugula talinayaan inaad si habboon u isticmaasho maaddo 50 xaraf ugu badnaan.
Waxaad haysataa meel kooban oo aad ku qorto sheygaaga, markaa waa inaad doorataa shay gaar ah, adoo isticmaalaya ficillo ficil ah oo la xiriira mawduuca emailkaaga.
Guud ahaan, alaabo badan ayaa si xun u akhriya telefoonnada casriga ah, kuwaas oo noqonaya kuwo aad u badan oo ay isticmaalaan xirfadlayaasha si ay u eegaan emailkooda.
2-Customize mawduuca emailkaaga
Haddii ay suurtagal tahay, waa inaad sheegtaa magaca iyo magaca koowaad ee xiriiriyeyaashaada heerka sheyga. Waa arrin kor u qaadi karta heerka furitaanka.
Adigoo faahfaahin ka bixinaya qofkaad qaadatid heerka mawduuca emailka, wuxuu dareemayaa qiimo iyo aqoonsi, kaas oo ku dhiiri gelin doona inuu furo oo akhriyo emailkaaga.
Jirka jirka emailka ah
Si aad u qorto email xirfad leh, waxaa lagugula talinayaa in aad si cad u qorto muuqaalka e-mailkaaga adigoo aan ka soo bixin maadada oo dhan oo ku saleysan heerarka qaarkood ee style iyo bandhigga.
Ka taxaddar inaad qorto email gaaban, oo leh weedh gaaban iyo mid sax ah oo ku siin doona raaxo dheeraad ah ee aad u heshay.
Waa kuwan waxyaabo yar oo xusuus mudan:
1-Isticmaal Khariidadda Classic
Adeegyada emaylka badankood waxay u oggolaadaan adeegsadaha inuu doorto font iyo qaabka qoraalka. Marka ay timaaddo emayl ganacsi, dooro farta caadiga ah sida "Times New Roman" ama "Arial".
Laguma talin in la isticmaalo font decoration.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa:
Ku aqbal cabbirka cabbirida ee akhriska
Iska ilaali aaladaha, sharaxaadda, ama midabada
Ma aha in la qoro dhammaan qoraalada xarfaha waaweyn
2-Qorista naqshad wacan
Si aad u hesho email xirfad leh, waxaa laguu doorbidi karaa sida kor ku xusan si aad wax uga qabatid cinwaanka magaciisa, halka ay ku jiraan cinwaanka dabeecadda qofka uu ku xigo magaciisa rasmiga ah.
3-Naftaada ku bilow cutubka koowaad
Haddii aad u qorto qof markii ugu horeysay (tusaale ahaan macaamiil cusub), waxaa muhiim ah inaad naftaada barato oo si kooban u sharaxdo ujeedada fariintaada.
Waxaad adigu u jeedin kartaa mid yar ama laba weedho.
4-Macluumaadka ugu muhiimsan mudnaanta
Ka dib markii aad soo bandhigtay, waxaan tagnaa meesha ugu muhiimsan.
Waa mid aad u xiiso leh in la soo sheego macluumaadka ugu muhiimsan bilowga emailkaaga. Waxaad ku badbaadin doontaa waqtiga aad heshay adigoo caddaynaya ujeedooyinkaaga.
Waa inaad soo jiidataa dareenka wariyahaaga oo aad toos ugu jeeddaa barta.
5-Isticmaal erey rasmi ah
Maadaama aad qoraysid emayl xirfad leh, waa inaad samaysaa aragti wanaagsan.
Waxaan kugula talinaynaa inaad ku qorto weedho dhamaystiran oo habdhaqan leh.
Laguguma talin inaad isticmaasho:
Erayo aftahan ah;
Qormooyin aan macquul ahayn;
Emoticons ama emojis;
6-Samee gabagabo ku haboon
Si aan u dhamaystirno email, waa in aan ka fekerno saxiixa isticmaalka, habka loo korsado, iyo caanaha naqshadaynta si ay u doortaan.
Waa in maskaxda lagu hayo in isgaarsiinta xirfadeed ay tahay mid a luqad aad u sarreeya. Aad bay muhiim u tahay inaad ogaatid sharciyada oo aad dooratid qaaciddada saxda ah si aad u isticmaasho dhammaadka emailka.
Qaaciddada la isticmaalo waa in lagu waafajiyaa tayada alaabteeda iyo qaabka isdhaafsiga.
Tusaale ahaan, haddii aad la hadlayso kormeere ama macmiil, waxaad isticmaali kartaa "salaan daacad ah", oo ah weedha ugu habboon. Halka haddii ay tahay jaal, waxaan ku dhammeyn karnaa emaylkeena ereyga "Maalin wanaagsan maalinta!" "
Marka la eego saxeexa, waxaad u sameeyn kartaa software-kaaga emailka si toos ah u geli saxiixa shakhsiga ah dhamaadka emaylkayaga.
Si ay u dhaqan gasho, saxiixa waa inuu gaabiyo:
Aan ka badnayn 4 sadar;
Wax ka badan 70 xaraf xariiq kasta;
Gali magacaaga koowaad iyo kan dambe, shaqadaada, magaca shirkadda, cinwaanka websaydhkaaga, taleefankaaga iyo lambarka fakiskaaga, iyo suurtogalnimada inaad xiriiriso boggaaga LinkedIn ama Viadeo;
tusaale ahaan :
Wakiilka shirkadda Y
Telefoon : 06 00 00 00 00 / Fakis: 06 00 00 00 00 XNUMX
Moobayl: 06 00 00 00 00
Hadal edeb leh:
Farxad ayey ii tahay inaan mar kale idin arko;
Salaan diiran ...
Dadka aan si gaar ah u naqaano, waxaan u isticmaali karnaa qaaciidooyin wanaagsan sida "hi", "saaxiibtinimo", "see you" ...
Tusaalooyinka kale ee qaaciidooyinka caadiga ah:
Fadlan aqbal, Mudane / Marwo, muujinta dareenkayga sharafta leh;
Fadlan aqbal, Mudane / Marwo, muujinta salaan diiran;
Fadlan aqbal, mudane / marwo, salaan qaali ah;
Fadlan aqbal, Mudane / Marwo, dareenkeyga xushmad iyo qadarinta leh;
Fadlan aqbal, Mudane / Marwo, muujinta tixgelinteyda ugu sareysa;
Adiga oo ku weydiisanaya inaad iga ogolaato salaanteyda ugu fiican;
Waxaan kaaga mahadcelinayaa dareenka aad siisay codsigayga;
U qoondeyn inaad aqbasho, Mudane / Marwo, maamuuska ixtiraamkayga qoto dheer;
Intii aan kaa sugayey inaan wax kaa akhriyo, fadlan aqbal, Mudane / Marwo, hubinta tixgelintayda ugu sarraysa;
Mahadsanid, waxaan kaa codsanayaa inaad halkan ka hesho, Mudane / Marwo, muujinta dareenkayga sharafta leh;
READ Higgaadinta khaladaadka shaqada: sidee ayay kuu arkeen kuwa ku aqrinaya?
7-Ku dar lifaaqyo
Ku saabsan dariiqyada, ha iloobin inaad u sheegto qofka qaataha ah adigoo ku sheegaya mowqifka emailkaaga si xushmad leh.
Waa mid aad u xiiso leh in la xuso xajmiga iyo tirada lifaaqyada loo diro qofka qaataha leh.
Marka la eego habka loo yaqaan "reverse pyramid", waxay ka kooban tahay qoraalka emailkaada xirfadlaha ah ee macluumaadka muhiimka ah ee farriintaada iyo ka dibna sii wadida macluumaadka kale ee hoos udhaca mabda'a.
Laakiin maxaa loo qaatay qaabkan?
Badanaa jumlada ugu horeysa waxay ka aqris wanaagsan tahay fariinta inteeda kale. Waa inay soo jiidasho leedahay. Adoo adeegsanaya habka haramka rogaya, waxaan si fudud u qabsan karnaa dareenka akhristaha waxaanna ka dhigi karnaa inuu doonayo inuu akhriyo emaylka ilaa dhamaadka.
Ilaa hadda sida qoraalku ku saabsan yahay, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho ugu badnaan afar qaybood, laga bilaabo 3 illaa 4 khadad kasta, iyada oo diiradda saareysa fikrad gaar ah cutubka.
Haddii aad rabto inaad qaadato habkan, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho:
ereyo isku xiraya jumladaha wada;
luuqad hadda iyo xirfad leh.
Sida aad u fahamto, email xirfad leh ma laha wax la mid ah kan loo diray saaxiib. Waxaa jira sharciyo ay tahay in la raaco warqadda.
1-Si taxadar leh ula daawee mawduuca
Sida aan u caddaynnay, waa inaad si sax ah u qorto mawduuca mawduuca (ama mawduuca) ee emailkaaga xirfadeed. Waa inay ahaato mid kooban oo cad. Aqbalahaagu waa inuu si dhakhso ah u fahmo waxyaabaha ku jira e-mailkaaga. Wuxuu awoodi doonaa inuu go'aan ka gaaro inuu furo iyo inuu dib u akhristo.
2-Si aad u noqoto mid naxariis leh
Sidaad u fahamto, waa inaad isticmaashaa qaabka salaanida iyo qaabka niyadeed.
Qaaciddu waa inay ahaadaan kuwo kooban oo si aad u fiican loo doorto.
3-Khaladaadka hingaadka saxda ah
Ugu horreyn, waa inaad dib u akhridaa emailkaaga oo aad hubisaa inaadan iloobin wixii macluumaad ah ee lagama maarmaanka ah, iyo sababta aadan qof kale u akhristin. Waa arrin aad u xiiso leh in la helo ra'yi qof kale.
Si loo saxo hirgelinta iyo khaladaadka naxwaha, waxaan kugula talineynaa in aad nuqul ka sameysatid e-mail-kaaga erey-hawleedka oo aad sameysato jeeg ah. Xitaa haddii softwarekani aanu sax ahayn dhammaan khaladaadka, way ku caawin kartaa. Haddii kale, waxaad sidoo kale maalgelin kartaa barnaamijka sixitaanka xirfadle.
READ Muhiimadda mawduuca mawduuca ee emayl xirfadeed
Aad bay muhiim u tahay in lagu daro saxiixa emailkaaga xirfadlaha ah. Waa inaad raacdaa shuruucda kor ku xusan si aad u qorto saxiixa xirfad leh.
Marka la xuso macluumaadka kala duwan ee ku saabsan shaqadaada, shirkaddaada ... qofka kaa hela ayaa si dhakhso ah u fahmi doona cidda uu la shaqeynayo.
Haddii ay guud tahay, boostada way ka yar tahay in la akhriyo. Waa inaad ka dhigtaa qofka rafcaanka ah inuu dareemo in boostada kaliya lagu soo hagaajiyo. Sidaas awgeed waa inaad adigu isku hagaajisaa sheyga, oo aad dooratid qaaciddada si aad u bilowdo in aad bilawdo emailkaaga.
Hadday tahay koox kooxeed, waxaa muhiim ah in la abuuro liisas kala duwan iyadoo loo eegayo astaamaha dadka ku qaata, dookhooda, danahooda iyo meesha ay ku yaalliin. Qaybsanaanta dadka wax helaya waxay kuu oggolaaneysaa inaad kordhiso heerka furitaanka e-mayladaada.
6-Sii rabto inaad furato boostada
Marka aad qoraysid email xirfad leh, waa inaad had iyo jeer ka dhigtaa qofka qaataha doonayo inuu furo. Guud ahaan, sheyga ayaa ah qaybta ugu horeysa ee riixda wariye si loo furo emailkaaga oo u akhri. Sidaas awgeed waa inaad siiso shay muhiim ah shaygaaga, ku bogso oo u noqo mid soo jiidasho leh.
Dareen ahaan isku mid ah, labada weedh ee ugu horeeya emailkaagu waa inuu keenaa qofka qaataha ah inuu sii wato akhriska. Waxaa lagugula talinayaa in aad soo sheegto macluumaadka ugu muhiimsan bilawga emailkaaga iyo inaad kiciso xiisaha wariyehaaga.
7-Ka fogow sheyda khaldan
Waa inaadan waligaa isticmaalin walxo marin habaabin si aad u kordhiso xaddiga furitaanka ee emaylkaaga.
Waa inaad ogaataa in e-mailkaaga soo dirto sawirkaaga (ama shirkaddaada) Sidaas awgeed, waa muhiim inaad ka fogaato walxaha diiqadeysan iyo marin-habaabinta. Sheyga waa inuu waafaqsan yahay e-mailkaaga.
8-Naftaada ku rid meesha akhristaha
Naxariistu waa cunsur aad muhiim ugu ah tixgelinta. Waa inaad isku dhigtaa meesha qaatahaaga si aad si habboon ugu qorto mawduuca emaylkaaga oo aad ka dhigto mid soo jiidasho leh. Waa inaad naftaada dhex gashid wakiilkaaga oo aad taxdaa su'aalo taxane ah oo isagu isweydiin karo. Waxay ka timid jawaabaha inaad la qabsan karto cinwaanka emaylkaaga.
9-Isticmaal cinwaanka emailka xirfadeed
Ciwaanada gaarka ah sida lovelygirl @… ama mudane @… gabi ahaanba waa mamnuuc. Marka la eego macnaha xiriirka xirfadeed, marnaba kama hadlin interlocutor annaga oo adeegsanayna ciwaanka noocaan ah. email.
Waxaa lagu talinayaa in aad isticmaasho cinwaanka e-mail xirfadlaha ah, ama ugu yaraan cinwaanka shakhsiyeed ee magacaaga iyo magacaaga.
The isgaarsiinta email xirfadle u baahan tahay tayo aad u wanaagsan, erayo gaar ah, qoraal ah oo kooban, codsi cad iyo higgaadin sax ah ay jariiradu. In la qaato xeerar, Talooyin iyo tabaha in aan kaliya ku xusan, waxaad ku qori kartaa email soo jiidasho leh, taas oo xiisaysaa aad qaadato si degdeg ah oo kor u xiiso.
Sida loo qoro emayl xirfad leh Janawari 21, 2021Tranquillus
horeWarbixinta: 4 Qodobbada Muhiimka ah ee Lagu Ogaado Si Guusha
socdaHagaha Habboon ee ugu Fiican Habboon Jarmal